कुम्मायकको बिकास र समृद्धि नै हाम्रो लक्ष्य होः अध्यक्ष चेम्जोङ
कुम्मायक गाउपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि पालिका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङको के योजना रहेको छ । ति योजनाको परिपुर्ति गर्न कस्तो सोच राख्नु भएको छ । विकास लक्ष्य पुरा गर्न आएको बजेटलाई कसरी बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ । नागरिकहरुले सेवा सुबिधाहरु उपयोग गर्न सक्छ ति बिषयहरु सँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको अन्तरर्वाताको अंश ।
के गर्दै हुनु हुन्छ ?
अहिले बिकास निर्माणको काममा व्यस्त छौं । बनिसकेका संरचनाहरुको अनुगमन योजनाहरुको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा लागि रहेका छौं ।
अहिले गाउपालिकाको प्राथमिकता के मा रहेको छ ?
यस आर्थिक बर्षको प्राथमिकता सडकमा परेको छ । त्यस बाहेक कृषी, शिक्षा, स्वास्थ्य पनि छ ।
मतदाताहरु मत खसाल्न जाँदा एउटा परिकल्पना गरेर तपाइको टिमलाई जिताएका छन् ति मतदाताले सोचेको जस्तो विकास पाए त ?
पाएका छन् भन्ने लागेको छ । सबै एकै पटक पुरा हुदैन क्रमश पुरा हुदै जाने रहेछ । हाम्रा चाहानाहरु असिमित छन् ति असिमित चाहाना पुरा गर्ने साधन सिमित छ । असिमित चाहानालाई सिमित साधनले पुरा गर्ने प्रयत्न हुदैछ । हाम्रो कार्यकालमा हामीले देखाएका पुरा गर्ने प्रयत्न गर्ने छौं । जनताको चाहाना र मत खसाल्दा देखेको सपना पुरा हुने बिश्वास लिएका छौं ।
पालिकाको विकासमा जन सहभागिता कस्तो छ ?
अहिले सबै मान्छेहरु आफ्नो गाउमा आएको विकासमा आफैं संलग्न हुन छाडेका छन् । सबै गाउपालिकाले गरिदिए हुन्थ्यो भनेर मुख ताक्ने काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ । आफ्नो घरमा आएको विकासमा आफैं सहभागि हुनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरु प्रति जनगुनासो आउने गरेको छ नि ?
त्यस्तो छैन उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । केही कतै कम्जोरी भएको पनि हुन सक्छ । विगतमा काम कम गरेर योजनाहरु फ्छोट गर्ने बानी परेकाले पनि केही असजिलो उपभोक्ता समितिले महसुस गरेका होलान् । तर त्यस्तो उपभोक्ताले गरेका काममा आतिहाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन । उनीहरुलाई प्राविधिक स्टिमेट अनुसार नै कामको जिम्मेवारी दिएको छ र तोकेको काम सम्पादन नगरी भुक्तानी गरिएको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरु नै ठेक्दार भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
यो निराधार आरोप हो । जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ताहरुलाइृ सहजिकरण त गरेका होलान त्यसलाई नै आरोप लगाउने भने त मेरो भन्नु केही रहेन । हामीले अहिले निमार्ण भएका संरचना बिशेष गरेर मोटरबाटोहरुमा मेशिन प्रयोग गरेका छौं ति मेशिनहरु साना योजनाका लागि ल्याउदा खर्च बढी हुने भएकाले त्यस्ता कामका लागी उपभोक्ता समितिहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले सहजिकरण गर्नु भएको छ । आफैं मेशिन लगाउने काम जनप्रतिनिधिले गरेका छैनन् । त्यस्तो काम कसैले गरेको थाहा पाइएमा कार्वाहि गरिने छ ।
यस आर्थिक बर्षका योजनाहरु त कनिका छरेजस्तो भो भन्ने आरोप छ नि ?
हाम्रो पहिलो अनुभव पनि भयो । असारमा निर्वाचन भयो त्यस्को परिणाम आउदा र पद भार ग्रहण गर्दा साउन लाग्यो हतार हतारमा कर्मचारीको अभावमा बजेट निर्माण गर्दा भखरै निर्वाचित भएको सबैको भावना बुझनु पर्छ भन्ने भयो त्यसेले साना भन्दा साना योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरियो । त्यसैले आरोप मात्र होइन साना योजना जनताका हितमा नै छन् । हामी सबैले त्यसै अनुरुप बुझनु पर्दछ । दुनियाँको कुरा सुन्ने हो । त्यसैको पछि त लाग्ने हौइन नी ? जनजिविकाका सवालमा हामी प्रष्ट छौं । जनताका घर आँगनमा सरकार आएको छ भन्ने अनुभुति पनि त दिनु पर्यो होलानी होइन र ? पहिले एमालेको ९ महिने सरकार हुदाँ पनि कनिका छरेर सके बजेट भन्थ्ये जनताले त राहत नै महसुस गरेका थिएनी । त्यसैले बजेटले साना भन्दा साना योजना समेट्न प्रयत्न भएको छ ।
योजनाहरुको प्रभाव के छ नी जनताहरु आशावादी त हुन सकेनन् भन्छन त ?
हामीले संचालन गरेका योजनाहरुले जनताका जनजिविकालाई सहज र सरल बनाएको छ । जन हितमा रहेको महसुस गरेका छन् । जनतालाई केही न केही त राहत भएको छ । जनताहरु आशा वादी छन् । जनताको अत्याधिक समस्याहरु समाधान भएका छन् । खानेपानीको समस्यालाई र्टानका लागि पालिकाले ट्याङकर किनेर सुलभ मुल्यमा पानी पुयाउने प्रयत्न गरेका छौं ।
तपाइको कार्यकालकामा कुम्मायक कस्तो बनाउने सपना देख्नु भएको छ ?
कुम्मायक गाउँपालिकाको समृद्धी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । त्यो समृद्धीका लागि कुम्मायकलाई कृषी पर्यटनमा जोड दिइने छ । सबै नागरिकहरुले कृषी र पशुपालनबाट मनग्गे आमदानी गर्न सक्ने भएको बनाउने लक्ष रहेको छ । नागरिकहरुले खाने पानी सहज रुपमा आफ्नै आगनमा थाप्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्ने । सबै घर परिवारमा बिजुली बत्तिको उज्यालो पुगेको हुन छ । पालिकाको सदरमुकामलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म पिच जोडिएको हुने छ मेरो कार्यकालमा । प्रत्येक टोलमा कतै पशुपालनको पकेट क्षेत्र कतै अदुवाको कतै बदामको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर लाखौं आमदानी कुम्मायक गाउपालिकामा भित्याउने लक्ष्य राखेको छु । त्यही अनुरुप काम गर्ने हाम्रो टिमको लक्षय रहेको छ । बस्ती विकासका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारीताका साथ अगाडी बढाउने छौं । यहाँबाट प्रत्येक बर्ष २०\_२२ घर परिवारहरु बसाइ सराइको अवस्था छ त्यो बसाइ सराइलाई पुनः कुम्मायक गाउँपालिकामा फिर्ता आउने गरीको विकास गर्ने लक्ष राखेको छु । त्यसकालागि राजनीतिक दल नागरिक समाज बुध्दीजिवी समाजसेवी सबैको ध्यान अब समृद्ध कुम्मायक बनाउनेमा लगाउन सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता नेतृत्वमा हार्दिक आव्हान पनि गर्दछु । विकासमा हामी सबैको सहकार्य हुन जरुरी छ ।
अध्यक्ष ज्यूले त्यसो भनिराख्दा उपभोक्ता समितिमा नै अरु विचार राख्ने नागरिकहरुलाई निशेध गर्नु भयो भन्ने आरोप पनि छ त ?
हो सङ्क्रमण कालिन अवस्थामा तपाईले भने जस्तो भए कै छैन त म भन्दिन तर हामी उपभोक्ता समिति बनाउदा दल भन्दा पनि कस्ले बढी कामगर्न सक्छ उसैलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष स्थानिय नागरिकहरुले छान्दा रहेछन् । इमान्दार छान्दा त्यो हामी सम्बध्द पार्टीको पर्यो भने त्यसलाई छान्नु हुदैन । हामीले भन्न मिलेन । यो विकास बिरोधीहरुले हाम्रो काम प्रति लगाउने मिथ्या आरोप मात्र हो । यस आरोपमा कुनै सत्तयता छैन । हामी सुखी कुम्मायक बासी बनाउने संकल्पका साथ अगाडी बढेका छौं ।
अध्यक्ष ज्यु तपाईको कार्यकालको पहिलो आर्थिक बर्षको महत्वपुर्ण काम चाँहि के हो ?
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को कुम्मायक गाउँपालिकाको सबै कामहरु महत्वपुर्ण नै भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौ अबको आर्थिक बर्षमा पर्यटनका क्षेत्रमा के गर्ने रुट क्लियर भएको छ । यासोक बजारको ढल निकाश, बजारलाई सुब्यवस्थित गर्नेकाम, खानेपानीको लागि ट्याङकर लगातका कामहरु ब्यवस्थापन गर्ने यि सबै महत्वपुर्ण काम भएका छन् । ति कामले पालिका प्रति आम नागरिकहरुको बिश्वास जित्नेकाम गरेको छ । आफ्नो योजना आफैले छानेको महसुस गरेका छन् । सिंहदरवारको अधिकार प्राप्त भएको महसुस गरेका छन् । नागरिकहरु गाउँपालिका प्रति आशा बादी बनेको महसुस गरेको छु ।
स्थानिय तह प्रति आम नागरिकहरुको धारणा त्यति राम्रो बन्न सकेन भन्छ नि ?
स्थानिय तहको काम प्रति आमनागरिकहरुको बढी चासो र अपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षा पुरा भईहाल्ने खालका केही थिए केही थिएनन् त्यसो भए पनि थोरै पुरा हुँदा धेरै अपुरा भए । बजेटको लिमिटेसन त्यो लिमिटमा रहेर धेरै जनचाहाना अनुरुपका योजना कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न सकिएन । त्यसो भएर पनि नागरिकहरुको धारणा स्थानिय तहका बारेमा नराम्रो भएको हुन सक्छ । विगतमा भन्दा धेरै कामहरु भएका छन् । कम आय भएका नागरिकहरुको पनि स्थानिय सरकारबाट विकास निर्माणको प्रत्याभुति पाएका छन् । शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ कामको थालनी गरिरहेका छौं । त्यस्तो स्थानिय तहले केही गर्न सकेनन् भन्ने त मलाई लाग्दैन धेरै काम गरेका छन् । जनताले चाहे अनुरुप नै गरे जस्तो लागेको छ । विपक्षिहरुले लगाउने आरोप मात्र हो । हामीले हाम्रो टोलमा सडक ल्याउने परिकल्पना गरेका थियौं नागरिकहरुको अपेक्षा कालो पत्रेको छ त्यसो भएर पनि यो आरोप लाग्ने गरेको हुन सक्छ ।
करको दर बढाएको पनि आरोप तपाइहरुमा छ नि ?
हामीले करको दर हैन दायरा बढाएका छौं । हिजो पनि भएका त्यसलाई आज हामी निरन्तरता मात्र दिएको हो । हिजो पनि थियो नि रुख काटदा राज्यलाई कर तिर्नु पथ्यो त ? हिजो बजारमा लगेर कुखुराका चल्ला, सुगुरका पाठा बेच्दा हामीले हाट बजार कर तिरेका छौं । किन मान्छेहरु आरोप लगाउछन् । ुभन्नका लागि जे भने पनि हुन्छ भनेको जस्तो कहि कतै भएको छैन यो मिथ्या आरोप मात्र हो । आम नागरिकलाई भड्काउने काम नगर्न म चेतावनी दिन चाहान्छु । नागरिकहरुलाई थाहा छ अतिरिक्त गर कसैले तिर्नु परेको छैन । जनतामा अनावश्क भ्रम सिर्जना गरेर यो संघियता भन्ने काम दिदैन भन्ने प्रचार गर्न खोजेको मात्र हो । बाँकी केही होइन भन्ने लागेको छ ।
संविधानले तिन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ पहिलो सरकार तपाइ स्थानिय तह तपाइलाई काम गर्न के ले अप्ठरयारो पारेको छ ?
हामी पहिलो पटक संघियताको अभ्यास गरिरेका छौं । आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मा पनि नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानिय तहहरुलाई दिएका छ । हामी नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौं । त्यसैले काममा केही अल्मल पनि छ यस्लाई स्वभाभिक मान्नु पर्छ । कतिपय नमुना कानुन केन्द्रीय सरकारले पठाउछ केही समय पछि फेरी अर्को पठाउछ । प्रदेश सरकारको अर्को आउँछ यसले गर्दा पनि अलमल परेको छ । कतिपय कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्न कठिनाइ आएको छ । नगरि पनि नहुने परिस्थिति बनेको छ, यस्तो बेलामा निर्णय लिन कठिनाइ परेको छ । कानुनी आधार पुरा गर्न राजपत्रमा प्रकाशन गरेर मात्र कार्यन्वयन गरिने भएकाले ति सबै कुराले हामीलाई काममा केही अप्ढाराहरु आएका छन् । यो परिस्थिति लामो समय सम्म नरहने भएकाले त्यति धेरै आतिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । हाम्रो लक्ष्य कुम्मायकको समृद्धी भएकाले हामी सबै लाग्न जरुरी भएको छ ।
कुम्मायक गाउँ पालिका सुख्खा क्षेत्र भएकाले तपाईले भने जस्तो समृद्धी सम्भव छ र ?
हो यो क्षेत्रका सबै भूभागहरु सुख्खा क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् । ति सुख्खा क्षेत्रलाई पनि राम्रो बनाउने हाम्रो लक्ष हो यस क्षेत्रमा हुने उन्नत जातका कृषी खेतीहरु छन् । सुख्खा क्षेत्र भनेर नै राज्यले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना संचालन गरिरहेको छ । खाने पानीका लागि हामीले भैपरि आउने भनेर नै २ वटा ट्याङकर खरिद गरी संचालनमा ल्याएका छौं । यो क्षेत्र कामै नलाग्ने त होइन नी यसका लागि हामी योजना बनाएर नै लागेका छौं त्यति कै हावाका भर हामीले समृद्धी भनेको होइन ।